192.168.1.254 Admin Login | Ny router Admin Login & Reset Password
192.168.1.254 dia ny tsy miankina IP Address nampiasaina ho Default ny router IP adiresy ho an'ny be sy ny router modems. 192.168.1.254 Hiditra mamela ny Admin mba hahazo miditra, Tefeo ny toe-javatra sy ny fanavaozam-baovao. ny IP 192.168.1.254 dia natokana ho ampiasaina amin'ny tambajotra manokana.
192.168.1.254 IP Address Admin Login Mamela anao hahazo ny ADSL ny router. Raha mila ny mpampiasa mba hidirana ny ny router tsy mampiasa tariby, ny adiresy IP fehezan-dalàna 192.168.1.254 manao izay ahafahantsika.
192.168.1.254 dia ny tsy miankina IP ho an'ny router, modems, ary broadbands ary midika fotsiny fa ny fitaovana ao anatin'ny tambajotra manokana io na IP tsy azo jerena mivantana amin'ny aterineto mampiasa ity IP manokana, fa ny fitaovana hafa rehetra ao amin'ny tambajotra an-toerana dia afaka mifandray fifandraisana amin'ny hafa amin'izany koa ny fitaovana tambajotra.
Misy sasany router sy ny Modem marika anisan'izany Linksys router sy ny Modems, Westell DSL Modems, Alcatel Modems, 3Com router, ary Modems, Billion router sy Modems sy ny maro hafa, izay matetika marika router fampiasana 192.168.1.254 tahaka ny toerana misy anao adiresy IP ho an'ny router.
Log ho any 192.168.1.254 IP Address
Ny mpampiasa dia afaka tanteraka tsotra izao 192.168.1.254 Login dingana amin'ny alalan'ny dingana manaraka.
dingana: 1- Connect ny PC na fitaovana ho an'ny ny router ethernet tambajotra amin'ny alalan'ny tariby na amin'ny Wi-Fi.
dingana: 2- Sokafy misy ny navigateur ao amin'ny PC sy ny karazana URL Sokajy://192.168.l.254 ao amin'ny navigateur.
dingana: 3- Ampidiro ny toerana misy anao ny router anarana sy teny miafina tsara sy ianao Ho eo ny router IP adiresy 192.168.1.254.
Indrindra amin'ny toerana misy anao router IP Address ny 192.168.1.254 mampiasa ny solon'anarana sy ny tenimiafina “Admin“. Na dia nanadino ny anarana sy teny miafina ny router dia afaka manampy ny 192.168.1.254 Login ary afaka reset ny ny router.
reset ny router
Ahoana no hadinoko ny Password?
Step-1: Manapaka na Vonoy ny mampiasa ny router.
Dingana-2: Press ka hazòny ny Reset ny bokotra eo amin'ny tontonana aoriana for 5 ny 10 na 15 segondra amin'ny fefy Pin ambony na amin'ny kompà na amin'ny fanjaitra, ary tamin'izany andro izany kosa Restart na eo amin'ny ny router.
dingana- 3: ankehitriny, hanafaka ny Reset bokotra sy miandry ny fitaovana reboot.
dingana 4: ankehitriny, ianao dia ho afaka mampifandray ny fitaovana solosaina ny ny router amin'ny alalan'ny tambajotra Ethernet tariby na amin'ny alalan'ny fampiasana ny Wi-Fi fifandraisana.
dingana 5: Mifandray amin'ny harato sy ny ny router dia reset izao.
Manantena aho fa ity lahatsoratra ity no nanampy anao tanteraka 192.168.1.254 Hiditra dingana sy tanteraka ny 192.168.1.254 Admin Login dingana. Raha toa ka mbola misy olana na zava-tsarotra avy eo valin eto ambany ary aoka isika mahalala. Raha mila fanazavana momba ny 192.168.1.254 IP Address, mitsidika ny tranonkala ofisialy ankehitriny.
192.168.1.254 hanova tenimiafina192.168.1.254 Reset Passwordny https://192.168.1.254 Hiditra
Previous Post:Linksys ny router Login & Linksys ny router Configuration Guide